Kernel 4.13 yave kuwanikwa kune wese munhu !! | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe kuve vhiki rakanonoka, iyo nyowani Linux kernel yave kuwanikwa kune wese munhu. Kernel 4.13 ikozvino inogona kuwanikwa kubva kune yepamutemo Kernel webhusaiti, izvi zvataurwa naLinus Torvalds kubva kune yepamutemo Kernel yekuvandudza tsamba yekutumira.
Iyi kernel nyowani inosanganisa mashoma matsva maererano nesoftware asi inowedzera uye inovandudza rutsigiro rwezvakawanda zvigadzirwa zvemuviri senge iyo ASUS Zen AIO MD-5110 keyboard kana nyowani SBC mhando mabhodhi, mabhodhi ane ARM ekuvakisa ayo ari kuwedzera kushandiswa.
Chinangwa chikuru cheLinux kernel vhezheni ndeyekugadzirisa nekuvandudza iyo kernel. Izvi zvinogadziriswa nekugadzirisa zvipembenene zvinoonekwa kana zvakaonekwa. Mune ino chikamu, Kernel 4.13 inozadzisa iri basa. Asi, mukuwedzera, iyi vhezheni itsva inosanganisira rutsigiro rwemhando nyowani dzehardware, senge SBC mabhodhi ane ARM kuvaka.
Nyowani Intel processor mapurani anotsigirwawo neiyi vhezheni yekernel. Mutyairi weNvidia weNouveau anosanganisira kutsigira HDMI 3D uye stereoscope; DRM chinhu chinowirirana chakaverengerwawo mukuburitswa uku pamwe nekuvandudzwa kwekutinhira kwechiteshi. Iyo itsva vhezheni inovandudzawo rutsigiro rweimwe faira masisitimu anoshandiswa mukuparadzira kweGnu / Linux. Yakavandudzwa faira masystem ndeBrtfs, EXT4, F2FS, uye XFS.
Iyo nyowani vhezheni yekernel inogona kuwanikwa kubva iyo yepamutemo webhusaiti, asi kuiswa kwayo kunoda ruzivo rwemberi / ruzivo. Saka kana tichida kuva neichi kernel uye isu hatina ruzivo irworwo, tinofanirwa kumirira chinguva. Asi kana tine kuendesa kuburitsa kugovera, ichave iri nyaya yemazuva tisati tave neiyo nyowani kernel mukugovera kwedu. Kana iyo vhezheni itsva yaiswa, tichaona kuti mashandiro ekuparadzira kwedu achavandudza zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kernel 4.13 yave kuwanikwa kune wese munhu !!